Madaxda Puntland iyo Galmudug oo goor dhow heshiis ku gaaray Gaalkacyo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxda Puntland iyo Galmudug oo goor dhow heshiis ku gaaray Gaalkacyo
written by warsan radio 12/11/2016
Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa goor dhow ku kulmay magaalada Gaalkacyo, iyadoo kulankooda ay goob joog ka ahaayeen Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid iyo Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya.
Kulankan oo aha amid albaabada u xirnaa ayaa waxaa lagu heshiiyay qodobo dhowr ah, iyadoo lagu balamay in la xoojiyo heshiiskii lagu saxiixay isu tagga Imaaraadka Carabta.
Labada dhinac ayaa 20-ka bishan ku kulmaya magaalada Kismaayo, iyadoo la sii adkeynayo heshiiska xabad joojinta ee laga gaaray colaada todobaadyada ka jirtay magaalada Kismaayo.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid ayaa soo dhoweeyay heshiiska labada dhinac, waxaana uu faray inay xoojiyaan heshiiska nabadda Gaalkacyo.
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsna Soomaaliya Micheal Keating ayaa dhankiisa balan qaaday in Qaramada Midoobey ay gacan ka geysaneyso dhaqan gelinta heshiiska.
Heshiiska ay goor dhow kala saxiixdeen Madaxweynayaasha Puntland iyo galmudug ayaa waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa xubno ka tirsan Aqalka Sare ee labada Maamul.
Qodobada lagu heshiiyay kulankii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa ah qodobado la mid ah kuwii hore ay ugu soo hehsiiyeen madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta.
Dagaaladda Galkacayo oo muddo bil ah ka dhacayay ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 40 qof, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 100 qof oo labada dhinac. Waana markii labaad oo heshiis laga gaarayo Dagaalo iyo Colaado ka dhacay magaaladda, oo heshiiskii u dambeeyay uu ka dhacay isla garoonka maanta lagu heshiiyay Sanad ka hor.
Madaxda Puntland iyo Galmudug oo goor dhow heshiis ku gaaray Gaalkacyo was last modified: November 12th, 2016 by warsan radio
Dhageyso: Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ah ee ka hortaga gudniinka fircoonig.